श्याम खत्रीले गरे आत्मसमर्पण, अदालत, प्रशासन र प्रहरीको सुन तस्करीमा यस्तो सेटिङ ! (भिडियोसहित) « News24 : Premium News Channel
श्याम खत्रीले गरे आत्मसमर्पण, अदालत, प्रशासन र प्रहरीको सुन तस्करीमा यस्तो सेटिङ ! (भिडियोसहित)
श्याम खत्रीद्वारा जिल्ला अदालत मोरङमा आत्मसमर्पण
साढे किलो सुन काण्ड सतहमा आएपछि फरार रहेका एसएसपी श्याम खत्रीले बिहिबार जिल्ला अदालत मोरङमा आत्मसमर्पण गरेका छन । यसअघि उनी बिरुद्ध इन्टरपोलमा डिफ्युजन नोटिस जारी गरिएको थियो । अदालतमा आत्मसमर्पण गरेलगत्तै उनको बयान लिईएको थियो । सो क्रममा खत्रीले गोरेले ल्याउने सुनमा प्रति किलो ५० हजार लिने गरेको बताएका छन । खत्रीसंग सेटिङ मिलाउने काम छिरिङ वालेङ घलेले गरेको उनले बयानका क्रममा बताएका छन । यसअघि खत्रीले पटकपटक गरी गोरेसंग १ करोड १२ लाख रुपैयाँ रकम लिने गरेको खुलेको थियो । त्यस लगत्तै उनको थुनछेक बहस भएको थियो । बहसपछि उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइएको छ ।
यसरी आउँथ्यो विमानस्थलबाट सुन, सीसीटीभी फुटेजको सत्य
त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमान स्थलको भन्सार चेकिङ कक्ष, बिदेशबाट आएक सामानहरु यहि कक्षबाट एक्सरे मेसिनमा चेकिङ भएर मात्र बाहिर जाने गर्दछ । यो दृश्य त्यहीको र त्यतिबेलाकै दृश्य हो जतिबेला दुबईबाट साढे ३३ किलो सुन नेपाल भित्रिएको थियो ।
यदि कसैले अवैद्य बस्तुहरु ल्याएका छन भने यहाँको एस्सरे मेसिनले तत्काल पत्ता लगाउँछ । एक्सरे मेसिनबाट सामानहरु यसरी भटाभट पास हुने गर्दछ । यदि कुनै शंकास्पद बस्तुहरु भएमा यो मेसिनले तत्काल पत्ता लगाउँछ । तर सोही एक्सरे मेसिनमा नै बसेका विमानस्थलका कर्मचारी राज ढकाल ले नै त्यहाँबाट सुन पास गराउने गर्दथे । एक्सरे मेसिनका टेक्निसियन राज ढकालकै मिलेमतोमा २५ ओटा सुनका लगेजहरु पास गराएका थिए । यो सुन काण्डमा विमानस्थलमा खटिएका तत्कालिन एसएसपी श्याम खत्रीको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको भन्दै उनी सहित ३५ जना बिरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौमा मुद्दा दर्ता भएको थियो ।
खत्रीसँग न्यायाधीश दीपेन्द्र अधिकारीले २ लाख धरौटी मागेका थिए
२०७३ सालमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका तत्कालीन प्रमुख तथा डीआईजी नवराज सिलवाल नेतृत्वको टोलीले त्रिभुवन अन्र्तराष्ट्रिय विमानस्थलबाट वाहिरिएको साढे ३३ किलो सुन प्रकरणमा तत्कालीन विमानस्थलका एसएसपी श्यामबहादुर खत्रीको संलग्नता देखियो । सुन तस्करीमा संग्लन भएको आरोपमा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा खत्री सहित ३५ विरुद्ध मुद्दा दर्ता भयो । खत्री सहित ३५ जना प्रतिवादी रहेको उक्त मुद्दाको पेशी काठमाडौं जिल्ला अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश दीपेन्द्र अधिकारीको इजलाशमा प¥यो । प्रतिवादी श्याम बहादुर खत्रीलाई मुलुकी ऐन अदालती व्यवस्थाको ११८ बमोजिम न्यायाधीश अधिकारीको इजलाशले २ लाख वा सो सरहको जेथा धरौटी राखेर पुर्पक्षका लागि छोड्न २०७३ चैत्र ४ गते आदेश दिएको थियो । आदेशवारे जिल्ला अदालत काठमाडौंका श्रेष्तेदार कृष्णप्रसाद नेपाल ।
यदि न्यायधीश अधिकारीले दिएको आदेशले उनले सहज रुपमा उन्मुक्ति पाउँने थिएनन् किनकी उनलाई २ लाख धरौटी मागिएको थियो । खत्रीले केही वरिष्ठ वकिल र केही सेटिङवाला न्यायाधीश समात्ने निकर्षमा पुगे । जिल्ला अदालतका न्यायधीश दीपेन्द्र अधिकारीले दिएको उक्त आदेश प्रति असन्तुष्टी जनाउँदै खत्रीले अदालती बन्दोबस्तको १७ नम्बर बमोजिम पुनराबेदनको लागि उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दिए । प्रत्यक्ष र परोक्ष रुपले उनले अदालतमा चलखेल गरे र उच्च अदालतका न्यायाधीशद्धय भीमकुमार ओझा र बलभद्र वास्तोलाको इजलाशले जिल्ला अदालतको आदेशलाई बदर गर्दै खत्रीलाई साधारण तारिखमा छाड्ने आदेश दिएको हो ।
सेटिङमा खत्रीको जागिर जोगाइदिएका थिए न्यायाधीश ओझा र वास्तोलाले
एसएसपी खत्रीलाई सामान्य तारिखमा छोड्न आदेश दिने उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्धय भीमकुमार ओझा र बलभद्र वास्तोला हुन । २०७४ श्रावण १२ गते न्यायाधीशद्धय भिमकुमार ओझा र बलभद्र बास्तोलाकै बेन्चमा खत्रीको १७ नम्बर सुनुवाई चल्यो र दुई न्यायाधीशकै आदेशले जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश दीपेन्द्र अधिकारीको आदेशलाई बदर गर्दै श्याम बहादुर खत्रीलाई सामान्य तारिखमा छोड्न आदेश दिएको थियो । यहि आदेशले नै खत्रीलाई प्रहरीको जागिरमा फर्कने बाटो खोलि दियो ।
स्रोतहरुको दावी छ कि खत्रीलाई छुटाउन करोडमा न्यायाधीशहरुसँग कुराकानी भएको थियो । सोही अनुसार न्यायाधीसद्धय ओझा र बास्तोलाको संयुक्त इजलासले खत्रीको विषयमा जिल्ला न्यायाधीश दीपेन्द्र अधिकारीको आदेशलाई वदर गर्दै भनिएको छ–“निवेदकहरुको निवेदन माग तर्फ हेर्दा, प्रतिवादी मध्येका श्याम बहादुर खत्री अनुसन्धान अधिकारी र अदालत समक्ष कसुरमा इन्कार रहेका सह प्रतिवादी श्री नारायण यादव समेतले यी प्रतिवादिको चिनजान रहने भएकोले मिसिल संलग्न कागजातहरुबाट देखिन नआएको अवस्थामा समेत यी प्रतिवादी श्याम बहादुर खत्रीबाट त्यहाँ अदालतमा धरौटी २ लाख माग गरेको मिति २०७३÷१२÷०४ को आदेश वेरितको देखिदा निजको हकमा बदर गरिदिएको छ । यी प्रतिवादी श्यामबहादुर खत्रीलाई मुलकी ऐन, अदालती बन्दोबस्त ४७ बमोजिम मुद्दाको पुर्पक्ष गराउनुहोला ।”
उच्च अदालतका न्यायधीशहरु भीम कुमार ओझा र बलभद्र वास्तोलाले दिएको आदेशकै कारण एसएसपी खत्री पदबहाली भएको हो । प्रहरी नियमावली २०७१ मा कुनै पनि प्रहरी फौजदारी अभियोग लागेर अदालतको आदेशले म्याद थपको स्थिती रहेकोमा म्याद थपको मिति देखि नै लागु हुने गरी निलम्बन हुने व्यवस्था छ । तर यदि कुनै पनि प्रहरी थुनछेकको आदेशको क्रममा साधारण तारेखमा छुटेको छ भने उसलाई नियुक्ति दिने तहका अधिकारीले नै उसको पदबहाली गर्न सक्ने व्यवस्थालाई समातेर खत्री पदमा वाहाल भएका थिए ।
थुनछेक बहसका क्रममा सामान्य तारेखमा छोडिएको कुनै प्रहरी कर्मचारीको हकमा उक्त प्रहरीलाई नियुक्ति दिने अधिकारीले नै उनको पदबहाली गराउने अधिकार पाउँछन । प्रहरी नियमावलीको नियम १८ ले यसको उल्लेख गरेको छ । यो व्यवस्था अनुसार प्रहरी बरिष्ठ उपरिक्षक अर्थात एसएसपीलाई नियुक्ति गर्ने अधिकार गृहमन्त्रीलाई हुन्छ ।
अदालतले सामान्य तारेखमा छोड्ने आदेश दिएपछि उक्त प्रहरीले नेपाल प्रहरीको कानुनशाखा मार्फत त्यसको जानकारी लिन्छन । निलम्बित प्रहरीले पदबहालीका लागि निवेदन दिएपछि उक्त निवेदन नियुक्ति दिने अधिकार भएको अधिकारी समक्ष पुग्छ । र तिनै अधिकारको निर्णयले उसको निलम्बन फिर्ता गर्न सक्छ । एसएसपी को हकमा गृहमन्त्रीले नियुक्ति दिने हुँदा निलम्बन फिर्ता गर्ने अधिकार पनि गृहमन्त्रीलाई नै हुन्छ । एसएसपी श्याम बहादुर खत्रीको निलम्बन तत्कालिन गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले फिर्ता गरेको हुन् र उनलाई तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक प्रकाश अर्यालको पनि राम्रै साथ र सहयोग मिलेको देखिएको छ ।
विमानस्थलबाट वाहिरिएको साढे ३३ किलो सुनमा संलग्नता रहेको भन्दै श्याम खत्री बिरुद्ध जिल्ला अदालतमा मुद्धा परेलगत्तै २०७३ माग २३ गते उनी निलम्बित भएका थिए । यो भन्दा अगाडी उनी महानगरिय प्रहरी विमानस्थल सुरक्षा गार्ड, गौचरणमा कार्यरत खत्रीलाई २०७४ श्रावण १२ गते उच्च अदालतका न्यायाधीशद्धय भीमकुमार ओझा र बलभद्र वास्तोलाले साधारण तारेखमा छोड्न आदेश दिएपछि २०७४ भदौ ६ गते उनको निलम्बन फुकुवा भएको थियो । निलम्बन फुकुवा पछि उनी प्रहरी प्रधान कार्यालय प्रशासन शाखामा हाजिर भए । त्यसपछि २०७४ भदौ १५ गते प्रशासन शाखाबाट मानवश्रोत विकास विभागमा रमाना भएका छन । त्यसपछि उनी छुट्टिमा बसेको देखिएको छ । न्यायाधीशद्धय भीमकुमार ओझा र बलभद्र वास्तोलाको इजलाशले गरेको आदेश र प्रहरीको कमजोर नियमावलीको फाइदा उठाएर सुन तस्करीको सेटिङ गर्ने खत्री सहजै प्रहरीको जागिरमा हाजिर भएका देखिएको छ । जस्ले उनलाई सुन तस्करीमा सहयोग गर्न अझै मनोवल दिएको उनी र उनकै नेतृत्वका बेला विमानस्थलबाट टनका टन सुन तस्करी भएर आएको देखिएको छ ।
सुन तस्करीलाई कारवाही गर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रतिवद्धता
त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलबाट गायब भएको साढे ३३ किलो तस्करीको सुन प्रकरण यतिबेला देशभर चर्चित बनिरहेको छ । केही समयअघि मात्रै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले त्रिभुवन विमानस्थलबाट टनका टन तस्करीको सुन नेपाल भित्रिने गरेको बताएका थिए । त्यसपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत हालै संसदमार्फत सुन तस्करी डरलाग्दो रुपमा देखिएको स्विकार गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले विमानथलको एउटा बाटोबाटै यति धेरै सुन तस्करी हुनुले आश्चर्यचकित बनाएको बताएका छन् । विमानस्थलको एउटा रुटबाट यसरी बालुवा जसरी सुन आउने गरेको प्रधानमन्त्री ओलीले स्विकारेका छन् ।
प्रधनमन्त्री ओलीले सुन तस्क्रीको बाटो खोजी हुँदै गरेको बताए । संगै साँढे ३३ किलो सुन काण्डका अपराधिहरुलाई गिरफ्तार गर्ने र कारबाही गर्नेक्रम जारी रहेको बताएका छन् । तस्करीको एउटा रुटको मात्र नभई अन्य रुटको पनि छानविन हुने ओलीले संसदमा बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री देखि गृहमन्त्री र सरकार नै त्रिभुवन विमानस्थलबाट ठूलो मात्रामा सुन तस्करी भइरहेको स्विकार गर्छ । तर यसमा ठूला ब्यक्ति भन्दा पनि भरिया र आसेपासेहरु मात्रै पक्राउ परिरहेका छन् । यसअघि साढे ३३ किलो सुनकाण्डमा मुछिएका एसएसपी श्याम खत्रीलाई समातेर गहन रुपमा अनुसन्धान नै नगरी यसै अधकल्चो अनुसन्धान गरेर छाडियो । फेरी अर्को काण्डमा पनि श्याम खत्री नै मुछिए । यसअघि सुन तस्करका भरिया गोरेले भनेका छन् । श्याम खत्रीलाई समातेपछि सबै खुल्छ । अब श्याम खत्रीले पनि आफैँ आत्मसमर्पण गरिसकेका छन् ।
अदालतमा उनको बयान जारी छ । अब श्यामखत्रीबाट खास रहस्य ओकेलिनु नै पर्छ । किनकी विभिन्न ठूला तस्करहरुको गिरोहका सुन एसएसपी खत्रीले मोटो रकम लिएर विमानस्थलबाट सुन पास गराइदिएका थिए ।ककसको सुन हो । त्यसको नेतृत्व कसले गरेको छ भन्नेबारे खत्रीले बोल्नैपर्छ । नत्र साँढे ३३ किलो सुनको अनुसन्धान पनि श्यामखत्रीबाटै पुर्णविराम हुनेछ ।
र अर्कोपटक यसरी नै सुन समातिन्छ अनी फेरी श्याम खत्री नै पक्राउ पर्नेछन् । त्यसैले यो अनुसन्धान निकै सुक्ष्म होस् । जसले तस्करका मुख्य नाइके अर्थात मालिकलाई बाहिर निकालोस् । त्यसका लागि पुलिस, अदालत र नेतृत्वसम्मको सेटिङ भत्काउन जरुरी छ ।